Archive du 20171027
Trano fonenan’ny Pr Zafy Albert Nisy nivarotra talohan’ny nahafatesany ?
Mivoaka ny resaka amin’izao fa nisy nivarotra ary efa lafo aman’olona ny « Villa Elisabeth » eny Ivandry, nonenan’ny Profesora Zafy Albert sy ny fianakaviany.
Fanonganana ny governemanta Sonia 34 no efa voaangon’ireo depiote
Misavorovoro indray ny eny anivon’ny Antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza. Mampiaka-peo ireo depiote, indrindra ireo mpomba ny fitondrana Rajaonarimampianina.
Dinika ho Fanavotam-Pirenena Hanana kandida ho filoham-pirenena
Toy ny mahazatra dia mivantambatana hatrany ny fanehoan-kevitry ny avy eo anivon’ny vovonana politika Dinika ho Fanavotam-Pirenena mikasika ny fahitan’izy ireo ny toe-draharaha nkehitriny taorian’ny fotoana elaela nahanginany.
Fanamboarana pasipaoro diplomatika Tafatsangana ny ivontoerana manokana
Hiverina hamoaka pasipaoro diplomatika sy pasipaoron’ny mpiasam-panjakana vaovao indray ny Minisiteran’ny raharaham-bahiny satria dia fijaliana ny an’ny mpiasam-panjakana mamita iraka any ivelany tao anatin’izay herintaona izay, raha ny fanazavana.
Forum de la Diaspora Malagasy Nahavory Malagasy monina any ivelany miisa 400
Tanterahina mandritra ny telo andro eny amin’ny Village Voara Andohatapenaka ilay hetsika « Forum de la diaspora Malagasy » hamondronana ireo teratany Malagasy miparitaka manerana ny vazantany efatra hahafahana mampandroso ny firenena.
Ambohidrapeto Itaosy Nisehoana vaky fasana goavana
Tsy mifidy fasana hasiana intsony ireo mpangalatra taolam-paty eto amintsika na ambanivohitra na an-tanàn-dehibe.
Printsy Anglisy Anne Elisabeth Nankahery ireo zaza niharan’ny herisetra
Tamin’ny alalan’ny fitsidihana ny Birao Monosipaly momba ny fahadiovana na ny BMH Isotry no namaranan’ny Printsy vavy Anglisy Anne Alice Elisabeth ny fitsidihany an’I Madagasikara omaly 26 oktobra.
FJKM Androndra Nomarihina omaly ny ivon’ny faha-150 taonany
Nanamarika ny ivon’ny fankalazana ny faha-150 taona niorenany omaly ny fiangonana Fjkm Androndra fahasoavana (1867-2017). Hitohy hatramin’ny faran’ny taona ny hetsika.
Indro kelin’ny mpandrafitra
Mitodika etsy amin’ny Tanàna Voara Andohatapenaka ny mason’ny rehetra nanomboka omaly hatramin’ny rahampitso.
Tanjombato Nifandroritan’ny BMH sy ny fokonolona ny razana
Nisehoana savoritaka indray teny Tanjombato omaly. Nisy olona maty efa nandrasana iray andro tao am-bohitra indray no nifandrotehan’ny BMH sy ny fokonolona teny an-toerana.
Fihanaky ny pesta eto Madagasikara Antsoina hifampidinika amin’ny depiote ireo minisitra
Nanambara mazava ny solombavambahoaka Jean Michel Henri voafidy tany Ambovombe Androy fa efa misy paipaika voafaritry ny lalàmpanorenana amin’ny fikitihana azy.
Ady amin’ny fihanaky ny pesta Tokony ho vain-dohan-draharaha, hoy ny depioten’Ikongo
Tena mampisahota-tsaina ny vahoaka Malagasy ny resaka fahasalamam-bahoaka ankehitriny, hoy ny depiote voafidy tany Ikongo, Razafitsiandraofa Jean Brunel.
Mpiasan'ny AAA - Tiko Mitaky hatrany ny hanokafana ny orinasa
Tapa-bolana lasa izay no nikatonan’ny orinasa AAA Tiko Andranomanelatra, izay hifanilahan’ny tompon’andraiki-panjakana ny fanakatonana azy. Raha ny ara-taratasy dia fampiatoana vonjimaika ny famokarana no tokony ho natao fa tsy fanakatonana sy fanapahana Jiro.